March 2019 – Kalfadhi
March 31, 2019 March 31, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Kalfadhiga 43aad ee golaha wakiillada Puntland oo furmay 1dii jannaayo ee sanadkan ayaa maanta xirmay, waxayna dib ugu noqon doonaan hawlaha golaha 15ka Juun sida uu dhigayo xeer hoosaadka goluhu. Fadhiga maanta ee golaha ayaa lagu ansixiyay miisaaniyad saggaal bilood ah oo ay dowladdu ku shaqayn doonto, taas oo ay u fadhiyeen teer iyo sabtidii hore.Gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa shaaciyay in kalfadhigu xiran yahay ilaa Juun, goortaas oo la geli doono hawlaha kalfadhiga 44raad. Baarlamanka Puntland ayaa sida uu xeer-hoosaadkoodu dhigayo waxay yeeshaan laba fadhi oo…
Golaha wakiillada Puntland ayaa lifaaq ku daray miisaaniyadda dowladda ee ay maanta ansixiyeen, taas oo ahayd saggaal ah bilood ah isla markaasna dhannayd 54,000,450, (Konton iyo milyan iyo afar boqol iyo konton dollar). Golaha ayaa u jeediyay xukuumadda in miisaaniyadda ay wakiillada hor keenayaan ay ka saxaan khaladaad sharci oo ku jira, kuwaas oo inta badan goluhu ay dood ka yeesheen sabtidii. Gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa akhriyay qodoba lifaaqa ah ee lagu daray ogolaanshaha golaha wakiillada ee miisaaniyadda, waxayna kala yihiin; In wasaaradda maaliyaddu ay soo…
Sanatar Ilyaas Cali Xasan ayaa, isaga oo xusaya in berri lagu wado inuu furmo Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Aqalka Sare, waxa uu dadka la wadaagay waxa ay jeclaan lahaayeen in looga doodo kulanka ugu horeeya ee Golaha Aqalka Sare. Waxa uu u soo bandhigay ilaa 5 iqtiyaar, oo ah mawduucyo uu u soo jeediyey in ay dadku kala doortaan. Sanatar Ilyaas waxa uu yiri “maadama berito, oo ah 1-da April, uu Aqalka Sare si rasmi kalfadhigiisa 5-aad u furmaayo, maxay Shacabka Soomaaliyeed jeclaan lahaayeen in uu Ajendaha 1-aad noqdo”? Mawduucyada…
Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud ayaa ku tilmaamay mid aan sababeysneyn waqtigaan wuxuu ugu yeeray “Xaalad Deg Deg ah” oo uu sheegay in lagu soo rogay Muqdisho. Duqa Muqdisho, Injineer Cabduraxmaan Yariisow, ayaa sheegay in, si loo adkeeyo amaanka caasimadda, la xiri doono wadooyin fara badan, taas oo ay dad badan ku fasireen in Xamar Xaalad Deg Deg ah lagu rogay, dabcanna uu warka Sanatar Xuseen u muuqdo inuu yahay mid warkaas ka jawaabay. Hadalka Sanatarka, oo uu ku soo qoray Facebook-giisa, ayaa sidan u dhignaa:- Xaalad Deg Deg ah! Waxaan…
March 31, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta si buuxda u ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee saggaalka bilood ee sannadkan ka haray oo dhan $54,000,450, taas oo wasaaradda maaliyaddu ay golaha horgaysay sabtidii hore. Kulanka 24raad ee kalfadhiga 43aad ee maanta waxaa fadhiyay 40 mudane, waxaana miisaaniyadda ogolaaday isla markaasna ansixiyay 38 mudane. Waxaa jiray miisaaniyad saddex bilood ah oo goluhu ansixiyay bishii Jannaayo. Guud ahaan miisaaniyadda dowladda Puntland ee sannadka 2019 ayaa noqonaysa $72,000,600. Sabtidii, wasiirka maaliyadda Xasan Shire Cabdi iyo saraakiil sar sare oo wasaaradda ka tirsan ayay wakiiladu su’aalo badan ka…
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta mar kale kulan iyo dood ka yeelanaya arrimaha miisaaniyadda dowladda ee saggaalka bilood ee sanadkan ka haray. Miisaaniyad kooban oo saddex bilood ku ekayd oo goluhu ansixiyay bishii janaayo ayaa dhaqangalkeedu ku eg yahay maanta. Wasiirka maaliyadda, xisaabiyaha guud ee dowladda iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan wasaaradda ayaa goluhu arrinta miisaaniyadda su’aalo kulul ka weydiiyay sabtidii. Xildhibaanada qaarkood ayaa ka hadlay miisaaniyadda golaha la horkeenay in aysan ku dhisnayn siyaasadda xukuumadda cusub ee goluhu ansixiyay, maadama miisaaniyadani ay u diyaarsan tahay sidii tii…
March 30, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ku eedeeyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, inuu baajiyey Kulankii ugu horeeyey ee uu yeelan lahaa Golaha Shacabka maanta. Waxa uu sheegay in, haddii uu Guddoomiyuhu sii joogi lahaa daqiiqado yar Xarunta Golaha Shacabka, uu buuxsami lahaa Kooramka Golaha, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaa ayaan-darro ah in Gudoonka Golaha Shacabka oo sugi jiray ilaa kowda, si Kooramku u buuxsamo, markey daneynayaan iyagu ajandaha in markay hal saac joogeen, oo ay dhiman tahay dhawr iyo toban Xildhibaan, oo ay waliba qaarkood soo galeen…
March 30, 2019 March 30, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Golaha deegaanka degmada Garowe ayuu maanta u furmay kalfadhigoodii 26naad, kaas oo ay kaga tashantaan hawlaha shaqo ee dowladda hoose, isla markaasna ay ku dejiyaan go’aannada masiiriga ah ee degmadda. Waa kulan sannadkiiba laba jeer dhaca. Duqa degmada Garowe Axmed Siciid Muuse ayaa maanta golaha u sheegay horumaro ay ku talaabsadeen muddadii lixda bilood ahayd ee golahani jiray iyo in ay sameeyeen xiriiro dibedda ah oo waxtar u ah caasimadda. Waxaase jirta in boobka iyo khilaafaadka dhulka oo mudo dheer ka soo taagnaa Garowe ayaa weli caqabad weyn ku yihiin…
March 30, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta arrimaha miisaaniyadda waxay su’aalo kulul ka weydiiyeen wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi iyo saraakiil sar sare oo wasaaradda ka tirsan. Kulanka maanta ayaa ahaa kii 23aad ee kalfadhiga 43aad ee golaha wakiillada oo dib u bilawday 22kii bishan. Doodda golaha ayaa inteeda badan ku dhisnayd miisaaniyadda saggaalka bilood ah ee toddobaadkii hore la hor-geeyay oo dhamaanteed ah mid laga soo dheegtay tii sannadkii hore. Kororka dhakhli ee la filayay iyo iyo madaxyada qaarkood oo ay ahayd in wax lagu daro ayaa qayb ka ahaa…
March 30, 2019 March 30, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka, ayaa wacad ku maray inuu hor boodayo Mooshin ka dhan ah Xukuumadda, haddii ay Xildhibaannada Wasiirada ahi imaan waayaan Kulanka 1-aad ee ugu soo horeeya Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka, oo maanta baaqday. Sida ay xildhibaannada qaar sheegeen waxa ay dib-u-dhaca Kulankii Golaha ee maanta dusha u saareen Xildhibaannada Wasiirada ah oo, sida ay sheegeen, aan gabigoodba imaan kulanka maanta. “Waxaan balan ku qaadeynaa haddii fadhigaan fadhiga ku xiga, Golaha Wasiirada ay imaan waayaan fadhiga, oo waliba ay lambar wanka…